Jwxo-shiil oo Kobtii Lagu Waday Eegga Badhyaha Dhigtay, Meelna kaga Dhacay Shariciga ONLF – Rasaasa News
Jwxo-shiil oo Kobtii Lagu Waday Eegga Badhyaha Dhigtay, Meelna kaga Dhacay Shariciga ONLF
Jun 14, 2010 Jwxo-shiil oo Kobtii Lagu Waday Haatan Baroosinak Dhigtay, Meelna kaga Dhacay Shariciga ONLF
Waxaa dhab ah in ruuxna uusan naftiisa u sharxi karin bulshada uu la nool yahay, balse ay bulshadu sheegi karto dabeecadaha iyo dadnimada uu shakhsi walba ku leeyahay bulshada dhexdeeda, Jwxo-shiil, waligii jaajuus buu ahaa kolkuu joogay Somaliya. Eegana Ciyaalka ayuu camaatuujiyaa, car argka nin wayn isaga oo ag fadhiya, hadaan wax jirin.
Maxamed Cumar Cismaan [Jwxo-shiil], oo ah nin caan ku ahaa xukuumadii burburtay ee Somaliya ayaa 1998 amar Eebe ku soo dhexgalay halgankii ay waday Jabahda Wadaniga xoreynta Ogadeeniay isaga oo aan xiligaa diyaar u ahayn aaminsanayna Jwxo.
Dad badan ayaana isweydiin jiray, war sidee ayey ku dhacday in uu Jwxo soo dhex galo ninkii Ogadeen kala gaabiyey ee basaasi jiray. Waana sidii ay sheegayeen dadkaasi waxaan uu u dhurtay Jananimadiisii Somaliyadii jabtay, Jwxo-na waa kii jabiyey.
“Dhargaa waalan dhanshaana kaba daran”, Maxamed Cumar, waxaa u muuqatay in uu lacag ka samayn karo Jwxo, isaga oo isticmaalaya tabihii ka baratay xukuumadii uu u shaqayn jiray ee uu ka gaadhay darajada Janan.
Jwxo-shiil, waxaa uu ka sameeyey hanti badan intii uu ku dhexjiray Jwxo, ilamaa oo laga fujin waayey xitaa in la raaco shuruucda ururka. Sida aan ognahay waxaa laga qaaday madaxnimada Jwxo sanadkii 2007, ilaa iyo maantana waxaa uu sheegtaa in uu yahay garab Jwxo ah.
Jwxo-shiil, waxaa uu galay dambiyo ula kac ah, waxaanu uu si beel ah u dilay rag caan ah, oo ay ka mid yihiin kuwii isaga Jwxo, oo uusan xilgaa doonaynin ku marti qaaday, wanaag ay u hayeen xiligaas, balse waxaa uu noqday dhunkaashii Jwxo loo beeray ee ay ku bakhtiday.
Kolkii ay aragtay ummada Somalida Ogadeeniya Jwxo-shiil, in uusan ahayn nin halgan iyo wanaag ujeeda balse uu yahay nin hunguri doon ah, ayey gacmaha ka laabteen oo ay ka jareen Qaaraankii ay siin jireen
Jwxo-shiil, ayaa muddo waxaa uu ku wareersanaa Qaraanka laga jaray iyo waliba beeshiisii oo cadaadis lagu saaray in ayna jirin halgan uu wado Jwxo-shiil oo ay ku taageeraan. In kasta oo ay wali jiraan kuwo isaga u daba socda kaliya isku reer baan nahay.
Jwxo-shiil, ayaa sida aad ogg tihiin ama aad aragteen waxaa uu shir la qaatay Somaliweyn isaga oo ugu baaqay in Itobiya lala dagaalamo si loo dhiso qarankii Somaliyeed. Jwxo-shiil, waxaa uu ahaa Janan Somaliyeed waligiibana Jabhadnimadu kama dhaadhacsanayn, ee waxaa uu sugayey bal in uu dhasho qaran Somaliyeed inta uu ku dhuumanayo magaca Jwxo.
Hadaba, kolkii uu ku dhuuman waayey magaca Jwxo, ayaa waxaa uu bilaabay in uu Somaliweyn shir la qaato. Runtii ma uu wado dan Somaliweyn iyo mid Jwxo toona ee waxaa uu wataa dan isaga u gaar ah oo ah, taas oo ah in uu iska ilaalinayo in uu guriga ku hoydo oo uu kici waayo.
Waxaanu u sheegaynaa kuwii Jwxo-shiil aan awal hore ka kari la,ayn ee lahaa waxaa uu wadaa danta halganka Jwxo, maanta ha ku quus qaateen, mudadii 20 ku dhawaadka ahayd ee ay Jwxo halganka ku jirtay, waa markii koowaad ee la is ag dhigo calanka Jwxo iyo midka Somaliya.
Hadii, ay Jwxo doonayo in ay adeegsato Somaliweyn lama ayna baxdeen ONLF, calan u gaar ahna ma ayan samaysateen. Waxaase nasiib daro weyn ah in Jwxo-shiil, uu maanta ug geeyo calanka ONLF ummada xaraysa jiritaankaagaba, waxbase ha la yaabin way la martaye.
Ghana oo 1-0 Kaga Badisay Serbia
Maxamed Cabdi Gaandhi oo ka Qayb Galay Shalay Shir Qarsoodi ah, oo Shirqool ah, Ayna Soo Qaban Qaabiyeen Kooxda Jwxo-shiil